Nezvedu - Huaian Junbao Hydraulic Machina Co, Ltd.
Kugamuchirwa kuJiangsu Huaian Junbao Hydraulic Machchan Co, Ltd. Isu takasarudzika kugadzira inoyerera flow control vharuvhu, directional control hydraulic valve, yakawanda control spool valve, yakanyanya kudzvinyirira multi-port vharuvhu uye nezvimwe. Tinogona kugovera P40 Series, P80 Series, RD5200 Series, SD WAVOIL Series, DCV Series, ZD Series, CDB Series uye zvichingodaro kubva pa 30L / min kusvika ku400L / min, Pressure range kubva 16Mpa kusvika 50MPa uye kumwe kudzvinyirira kukuru kwe Ultra-yakakwira kudzvanywa. , zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya pakurima, kuvaka, peturu, hove, migodhi uye zvimwe maindasitiri.
Isu tave mutungamiri muindasitiri. Uye isu tinogara tichizvipira pakugadzira, kutsvaga, kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinoenderana nemusika nezvikumbiro zvevatengi vedu.Zvigadzirwa zvedu zvakatotumidzira kuSoutheast Asia, Australia, Middle East, Africa uye Latin America uye nezvimwewo, vane mukurumbira wakanaka mundima iyi.
Ticharamba tichienderera mberi nekugadzirisa bhizinesi redu rekutonga uye mushure mekutengesa-sisitimu sisitimu, kuti tigokwanisa kupa vatengi kutenderedza basa nekunyatsogona mafomu mavhoriyamu nemapombi egiya, anotsigirwa nebasa redu rakanaka. Isu tinogara tichiita zvatinokwanisa kusangana nezvose zvinodikanwa zvevatengi vedu.
Isu tiri sosi yako yakazara yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mhinduro-inotungamirwa kwemaawa makumi maviri nemashanu pazuva.